यी चार राशिका युवतीहरु सासुको प्यारी हुन्छन् | नेपालन्युज
यी चार राशिका युवतीहरु सासुको प्यारी हुन्छन्
शुक्रबार , २५ भाद्र , २०७८
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको फरक फरक राशिअनुसार उसको व्यवहार पनि फकर हुने गर्दछ । विवहाको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको निर्धारण रहने गर्दछ । तसर्थ ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यस्ता कही राशीहरु रहेका छन् जसले आफ्नो श्रीमानको घरमा पनि सबैको प्यारो हुने र विशेष गरी आफ्नो सासुको प्यारी हुने गर्दछन् ।
कन्या राशि- यी राशी भएका युवतीहरु मिलनसार प्रकृतिका हुन्छन् । हंसमुख र मिलनसार हुने हुनाले आफ्नो सासुुसँग छिट्टै घुलमिल हुन्छन् ।यसका साथै परिवारको अन्य सदस्यहरुसँग पनि बलियो सम्बन्ध राख्न सफल हुन्छन् ।
मेष राशि- यो राशी भएका युवतीहरु भाग्यशाली हुन्छन् ।र यिनीहरुमा सम्पूर्ण घर राम्ररी चलाउन सक्ने क्षमता हुन्छ । यसका साथै जब यी राशी भएका युवतीहरु बुहारीको रुपमा घरमा प्रवेश गर्दा त्यस घरमा सुख, खुसी र समृदि्ध छाउँछ । जसका कारण सासुले पनि उनीहरुलाइ धेरै मन पराउने गर्दछन् ।
वृशि्चक राशि - यी राशी भएका युवतीहरु सुन्दर साथै शान्त स्वभावको हुन्छन् । र यी राशीका युवतीहरु आफ्ना पतीका साथै परिवारको लागि धेरै भाग्यशाली बुहारी साबित हुन्छन् । र सासुसँगै घरका अन्य सदस्य हरुसँग पनि निकै बलियो र राम्रो सम्बन्ध बनाउँछन् ।
वृष राशी- यो राशी भएका युवतीहरु सकरात्मक स्वभावको हुन्छन् । सकरात्मक स्वभाव भएकै कारण घरको वातावरण पनि सकरात्मक र सुखमय बनाउन सफल हुन्छन् । यसका साथै यी राशी भएका युवतीहरुले घरको राम्ररी व्यवस्थापन गर्दछजन् र आफ्नो सासुसँग पनि गहिरो र बलियो सम्बन्ध राख्दछन् ।
नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यसाे गर्नुहाेस्
हेर्नुहोस् आजको राशिफल, तपाईका दिन कस्तो रहन्छ ?
बुधबार यी कामहरु गर्नुहोस्, खुल्ने छ भाग्य
मंगलवारका दिन यी काम गर्नुहोस्, चम्किन्छ तपाईंको भाग्य
माधव नेपालको विस्वासिलो पात्र प्रमेश हमाल को हुन ?
नेपालले ओमानलाई ३७ ओभरमा अलआउट गर्यो, जितका लागि पायो १२२ रनको लक्ष्य
राष्ट्रिय जनमोर्चा एमालेमा समाहित !
नौ हजार २५० क्याप्सुल प्रतिबन्धित औषधिसहित दुई युवा पक्राउ
महिला प्रहरीको डीएसपीसँग अवैध सम्बन्ध, मोबाइलमा भेटियो ५० अश्लील भिडियो
संखुवासभा हत्या प्रकरण : यसकारण प्रहरीको ‘नोटिस’मा परेका थिए लोकबहादुर
आरोपीको बयान – ‘तेजबहादुर मात्र मार्न खोजेको थिएँ, देख्नेजति सबैलाई सिध्याएँ’
यस्तो छ प्रतिस्थापन विधेयकको पूर्ण पाठ
काठमाडौंमा तीन सय बढी घर डुब्यो